Waa Tuma Hooyadii Wiilkeeda La Dilay ‘ee Horseedday Afgambigii Cumar Al-Bashiir’? |
Waa Tuma Hooyadii Wiilkeeda La Dilay ‘ee Horseedday Afgambigii Cumar Al-Bashiir’?
Khartoum(GNN):-Axlaam Khidir waxaa wiilkeeda sanadkii 2013-kii lagu dilay dibadbaxyo nabadeed oo looga soo horjeeday dowladda Suudaan.
Maalintii gurigeeda laga qaaday naxashkii uu ku jiray meydka wiilkeeda ayey wacad ku martay inay u istaagi doonto sidii ay caddaalad ugu heli lahayd.
Bishii Dicember ee sanadkii 2018-kii, isla markii uu curtay kacdoonkii looga soo horjeeday madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir, Axlaam waxay noqotay mid ka mid ah mudaharaadeyaashii ugu caansanaa ee hoggaaminayay dibadbaxyada, waxayna xiriir aad u adag la yeelatay dhalinyarada bannaanbaxa ku sameyneysay waddooyinka.
Waxay ka mid ahayd mudaharaadeyaal ay gacanta ku dhigeen ciidamada amniga, waxaana “loo garaacay si arxan darro ah”.
Barnaamijka BBC-da ee 100 haween ah ayaa la kulmay Axlaam, waxayna ka sheekeysay sidii ay kacdoonka uga qeyb gashay iyo farxadda ay hadda dareemeyso.
Ma jirto cid ilaa hadda lagula xisaabtamay dilka Axlaam wiilkeeda
“Markii naxashka uu ku jiray meydka wiilkeyga laga saaray albaabka gurigeyga, waxaan ku dhawaaqay dagaal ballaaran. Waxaan ballan ka qaaday wiilkeyga, inta aan meydkiisa loo qaadin qabrigii lagu aasayay, waxaana ku idhi: “Xazaa, waxaan Alle ugu dhaartay inaan inta aan noolahay u dagaallami doono xuquuqdaada. Waxaa ballan igu ah inaan ama xaqaaga helo ama anigana aan u dhinto sidaada oo kale”, ayey tidhi Axlaam.
Inkastoo ay laamaha amniga mamnuuceen qabanqaabada mudaharaadyada iyo ka qeyb qaadashadoodaba, Axlaam way diidday inay salka dhulka dhigto “ilaa inta ay kasoo dhicineyso caddaaladda ka maqan wiilkeeda”.
“Waxaan ku adkeystay inaan dagaalka sii wado, sababtoo ah Suudaan ma aha meel uu hal ruux leeyahay, waa waddan u dhaxeeya dhammaan shacabka Suudaan, oo xuquuq siman ay ku wada leeyihiin”, ayey tidhi.
Waxay si weyn u muujisay taageerada ay dhalinyarada u heysay, khudbado badan ayeyna uga jeedisay dibadbaxyada bartamahooda.
“Markii aan arko dhalinyarada ku mudaharaadeysay waddooyinka waan ku farxi jiray waana ka murugoon jiray, waxa aan niyadda ku dhisan jirayna waxay ahayd in dhalinyaro badan ay u heellanaayeen inay xuquuqdooda raadsadaan, laakiin dhinaca kalena waxaan ka baqayay inay ku dhacaan wixii ku dhacay dhalinyaradii la laayay 2013-kii, oo wiilkeyga uu ka mid ahaa”.
Hase yeeshee, waxay sheegtay in aysan wax dan ah ka lahayn arrimaha siyaasadeed ee dalkaas.
Kadib afgambigii Al-Bashiir
Cumar Al-Bashiir waxaa la afgambiyay bishii April
Cumar Xasan Al-Bashiir waxaa ugu dambeyn xilka laga tuuray bishii Apriil ee sanadkan 2019-ka, ka dib markii uu madaxweyne waddankaas ka ahaa 30 sano.
Waxaa meesha ka baxay dhammaan hoggaankii milatariga ee gacanta ku hayay xukuumaddii lagu eedeynayay inay ahayd “kali taliska”.
Haddaba sidey dareentay Axlaam markii kacdoonka ay qeybta ka ahayd lagu afgambiyay hoggaamiyihii muddada dheer waddankeeda xukumayay, wiilkeedana uu ku dhintay dibadbaxa looga soo horjeeday?
“Ma aqaanno wax aan dareenkeyga ku qeexo markii xilka laga tuuray Al-Bashiir. Aad baan ugu farxay waayo waxaan ku hilmaamay murugadii i heysay oo dhan. Waxaan dareemay in ballantii aan ka qaaday wiilkeyga Xazaa ay ii hirgashay, wacadkiina aan kasoo baxay”, ayey tidhi Axlaam.
Heshiiskii laga gaaray qalalaasaha
Mudaharaadyada Suudaan ayaa markii ugu horreysay ka billowday cabasho ay shacabka ka muujinayeen sicir barar
Shacabkii waddooyinka ku mudaharaadayay ayaa diiday inay soo afjaraan dibadbaxyada, xitaa markii uu meesha ka baxay Al-Bashiir, waxayna dalbanayeen in maamulka lagu wareejiyo xukuumad rayid ah.
Hase yeeshee, waxaa ugu dambeyn qalalaasaha lasoo gunaanaday ka dib markii heshiis laga gaaray arrimihii la isku hayay.
Maamulka dalkaas ayaa lagu wareejiyay guddi isku dhaf ah oo isugu jira wakiillo ka kala socda shacabka iyo milatariga, ilaa inta laga gaarao xilliga doorasho loo dhanyahay laga qabanayo.
Madaxweynihii hore oo xabsiga loo taxaabay ayaa isagana wajahaya maxkamadeyn salka ku heysa dacwado noocyo badan leh.